İhale İlanı : Bağımsız Denetim Hizmeti Alınacaktır - RayHaber
« ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ရထားတူရကီက Metro ရထားဘီးဘားချောဆီကိုများနှင့်ပွတ်တိုက်အားမွမ်းမံပိုင်ဆိုင် Buy ပါလိမ့်မယ်
ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များ (IFRS) ၏ကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်ချုပ်ရေးတူရကီဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစံချိန်စံညွှန်းစောင့်ကြည့်အားဖြင့်၎င်း, ဥပဒေရေးရာတာဝန်ဝတ္တရား "လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်ချုပ်" ဝန်ဆောင်မှုဝယ်ယူ 4734 အမှတ်ပြည့်စုံများအတွက်အများပိုင်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ 19 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်:
တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2018 / 559911
က) လိပ်စာ: စီးပွားရေးဝယ်ယူမှုနှင့် Inventory ထိန်းချုပ်မှုဌာနမှ Hippodrome Anafartalar Caddesi ၏ TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအဘယ်သူမျှမရပ်ကွက်:306050 ALTINDAĞ / တူရကီ
ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3123090515 - 3123115305
ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: tcdd@tcdd.gov.t
တူရကီကျွန်ုပ်တို့၏ Entity ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစံချိန်စံညွှန်းပြင်ပအလုပ်၏ '' လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်ချုပ် '' ရွေးချယ်ရေးအားဖြင့်စစ်ဆေးခြင်းများအတွက်ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်း (IFRS) ၏။
ခ) Place: စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး၎င်း၏လက်အောက်ခံနှင့်တွဲဖက်
ဂ) အချိန်: တင်သည့်9သည့် နေ့မှစ. (ကိုး) လ
က) Place: စီးပွားရေး Anafartalar Mah ၏ TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ။ Hippodrome CAD ။ အမှတ်306340 ALTINDAĞ / တူရကီ
ခ) နေ့စွဲနှင့်အချိန်: 04.12.2018 - 10: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: သင်လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်လိမ့်မည် 28 / 09 / 2015 လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်န်ဆောင်မှုစာရင်းစစ်စံနှုန်းများနှင့်အညီစာရင်းစစ်ဆေးခံရဖို့တူရကီအတွက်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီပြင်ဆင်သမ္မတနိုင်ငံ STATE ရထားလမ်း Administration ရုံးချုပ် (တူရကီစာရင်းကိုင်စံချိန်စံညွှန်းမှ) TMS အကြား 01 / 01 / 2015 ၏ TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှု၏ (TCDD) အထွေထွေညွှန်ကြားမှုနှင့် 31 / 12 / 2015 ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းဖြစ်လိမ့်မည် 4734 19 ရက်စွဲပါလွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်ဝန်ဆောင်မှုဝန်ဆောင်မှုဝယ်ယူလက်ခံရရှိပြည်သူ့ဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2015 / 106034 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး 06280 GAR ALTINDAĞ / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3123243399 - 3123115305 ဂ) အီလက်ထရောနစ် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းလွတ်လပ်သောအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအကဲဖြတ်ဝန်ဆောင်မှုAlınacaktır 27 / 03 / 2019 high-မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းလွတ်လပ်သောအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအကဲဖြတ် Service ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်န်ဆောင်မှုများRAYSİMAŞရထားလမ်းစနစ်အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာအကြံပေး Joint Stock ကုမ္ပဏီ TCDD KayaşSÝVASမြန်နှုန်းမြင့်ရထားစီမံကိန်းလွတ်လပ်ရေးလုံခြုံမှုဆန်းစစ်ချက် SERVICES ဝယ်ယူရေးဝယ်ယူရေး 4734 အမှတ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ 19 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2019 / 132028 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: တက္ကသိုလ် 15966/ 26 06800 ÇANKAYA / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 03122270219 - 03122270218 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: eguldal အဆိုပါ @ raysimas .com ဃ) တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းအင်တာနက်လိပ်စာတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-နူးညံ့သော ...
လွတ်လပ်သောလေးစားလိုက်နာခြင်းအဘို့အရထားလမ်းစနစ်များ (Goku) န်ဆောင်မှုများ 04 / 10 / 2012 လက်ခံရရှိလွတ်လပ်သောလိုက်နာမှုန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူရထားလမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်တစ်ဦး Designated အဖွဲ့အစည်း (Goku) မှ, မသင်မနေရ, optional ကိုဒါမှမဟုတ်စာချုပ်မှပေါ်ပေါက်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း - လွတ်လပ်သောလိုက်နာမှု SGS သည့်စနစ်ကနေရထားလမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်န်ဆောင်မှု။ သင်တစ်ဦးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီများမှာပဲဖြစ်ဖြစ်, တကမီးရထားကုမ္ပဏီ (DAF), ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသို့မဟုတ်အော်ပရေတာကိုဆိုလိုသည်ဖြစ်စေ, ရထားလမ်းစက်မှုဇုန်စနစ်များနှင့်စပ်လျဉ်းအချို့စည်းမျဉ်းများနှင့်အတူလိုက်နာမှုပြသနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ အဖွဲ့အစည်း (Goku) သင့်မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်သောလိုက်နာမှုန်ဆောင်မှုများ, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှု, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်စစ်ဆင်ရေးအဖြစ်ရွေးချယ်နိုင်ပါသို့မဟုတ်စာချုပ်မှပေါ်ပေါက်ရထားလမ်းလိုအပ်ချက်များကို Designated နှင့်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုသေချာစေရန်ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်အကဲဖြတ်ပါဝင်သည်။ အဆိုပါရထားလမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် Goku လွတ်လပ်သောလိုက်နာမှုန်ဆောင်မှု ...
Afyonkarahisara Ropeway Project မှလွတ်လပ်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ 18 / 09 / 2013 Afyonkarahisara Ropeway စီမံကိန်းကနေလွတ်လပ်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်း: Afyonkarahisar လွတ်လပ်သောမြို့တော်ဝန်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း Kurt Aydemir, ချဉ်းကပ်ဒေသခံရွေးကောက်ပွဲများမှစီမံကိန်းရှင်းပြဖို့ရောက်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်တမြို့လုံး၏ရူပါရုံကိုပြောင်းလဲသူသည်မြို့တော်ဝန်ထင်လျှင်နားလည်သဘောပေါက်ရန်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုစီမံကိန်းအကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်များကိုဖန်ဆင်းပါလိမ့်မယ်ယုံကြည်နေသည့်ဝံပုလွေ။ Kurt polemics နှင့်ပြည်တွင်းခိုက်ရန်နဲ့အလုပ်ဖော်ပြတဲ့တစ်ခုတည်းသောရည်မှန်းချက်၏ဝန်ဆောင်မှုကပြောသည်။ ဒါ့အပြင် Kurt, မြို့ကထိုက်တန်ပါတယ်အရပျမဟုတျပါဘူး, သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာများကိုတစ်ဦးတိုးပွားလာပြဿနာဖြစ်လာမှတ်ချက်ချသည်။ အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းအပတ်တိုင်းကြေညာချက် Make သူတို့အသစ်တခုစီမံကိန်း Kurt နှင့်အတူမဲဆန္ဒရှင်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်, သူတို့သည်မဲဆန္ဒရှင်မျက်နှာသာပြသနိုင်ဖို့ကိုရှေးခယျြပါလျှင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသော့ခတ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့့သည်က ...
တူရကီ, Altındağရပ်ကွက် Hippodrome Anafartalar Caddesi အဘယ်သူမျှမ:306000 Türkiye